Ga Mone – Page 271 – GaMone Media
ရင်ဖိုစရာ အကိတ်ပုံ လေးတွေ တင်ပေး လိုက် ပြန်တဲ့ မရန်ဆိုင်းနူး
ဆက်ဆီမော်ဒယ် မရမ်ဆိုင်းနုဟာ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူး များစွာကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင် လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှ တ ရားေ တွနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ […]
ကြည့်မိသူ တွေ ရင်ခုန်သံ အထွဋ် အထိပ် ရောက် အောင် ကပြ လိုက် တဲ့ မမ J Naw ရဲ့ ဗီဒီယို
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ model J Nawဟာ မိန်းကလေးတိုင်းအား ကျရလောက်အောင် အနေအထိုင်၊ ဖက်ရှင် ကျ ပြီး အမြဲတမ်း စမတ်ကျသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများ ဆုံးတင်လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ […]
သူမကတော့ ယခုမှာ အိမ်နေရင်း ပုံစံလေးနဲ့ ရင်ခုန်စရာ ကောင်းနေပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ အလှတရားတွေကို မြင်နေရတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးကို ချပြ လာခဲ့ပါတယ်။ အသားအေ ရဖြူေ ဖွးြ ပီး ေြ ကွလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ […]
မော်ဒယ်လ်လုလုအောင် ကတော့ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ အနုပညာ ရှ င်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ အချိုးအစားပြေပြစ်ပြီး သွယ်လျလှပတဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကြွေလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမိုက်စားပုံ […]
ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်း လောက်အောင် ဆက်ဆီ ကပြထားတဲ့ ဘေဘေီမောင် ရဲ့ အလန်း စား ဗီဒီယို
ဘေဘီမောင်ကတော့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မျက်နှာကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ဝန်းရံ အားပေးခြင်း ခံနေရသူပါ။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကိုလည်း ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ခြေလှမ်းမှန်မှန် နဲ့ လျှောက်လှမ်းနေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော် သားဂန်း နဲ့လည်း အရမ်းချစ်ကြတဲ့ မနဲ့မောင်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေအားကျနေရလောက်အာင် သာယာတဲ့အချစ်ခရီးလမ်းကို […]
ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေး ကို အသားကုန် လှုပ်ခါ ကာ ခပ်မိုက် မိုက် လေး ကနေ တဲ့ လမင်းကဗျာ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
လမင်းကဗျာဟာ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ ကိုလည်း အမြဲလိုလို ဝေမျှတင်ဆက်ပေး နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလပ် ချိန်များမှာလည်း Tik Tok လေးတွေ ဆော့ကစားလေ့ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကလည်း လမင်းကဗျာရဲ့ Tik Tok […]
တနင်္ဂနွေ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1ရုပ်တည်ကြီးနေတတ်ပေမယ့်..တကယ်ခင်သွားရင်လဲ သူငယ်ချင်း အဖွဲ့ထဲမှာမျက်နှာအပြောင်ဆုံးကသူပဲ အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ်ရတာမလိုလိုတာမရတွေလေ အစွဲလန်းလဲကြီးတယ် ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့မတူသလိုမုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူးအချောကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်ညို့အားအပြင်းဆုံးက အသံ (အသံလေးကြားဖူးရုံနဲ့တင် စွဲလန်းသွားစေတာမျိုး) တနင်္လာ အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. […]
လတ်တလောမှာတော့ ပိုပိုက နောက်ထပ်ထွက်ရှိမယ့် သူမရဲ့ သီချင်းအသစ်တွေအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေကို ပြုလုပ် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အားလပ်ချိန်လေးတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်တဲ့ ပိုပိုက အလှအပအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပုံမှန်ပြုလုပ်လေ့ ရှိတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ် […]
အိပ်ယာ အသုံးအဆောင် တွေ မကြာ ခဏ လျှော်ဖို့ ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ..?
ကိုယ်ညစဉ်အိပ်နေတဲ့ အိပ်ယာဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်ဘုံ လေးပါပဲ။ အဲဒီနေရာလေး မှာ တစ်နေ့လုံး ပင်ပန်းလာသမျှ လဲလျောင်းအပမ်းဖြေ အိမ်စက်လိုက်ရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှတောင် လဲနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေ ခရီးထွက်လို့ အခြားနေရာတစ်ခုမှ နှစ်ည သုံးညလောက် အိပ် […]
ကလေး မထိန်းချင်လို့ မောင်လေးတွေဆို မကြိုက် နိုင်ဘူး လို့ အပျိုကြီး မေပန်းချီ ဈေးဗန်း ခင်းပြီ (ရုပ်/သံ)
ယခုအခါမှာတော့ မေပန်းချီ ရဲ့ အင်တာဗျူးလေး ကို တင်ပေး လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Cele Zone က အင်တာဗျူး တဲ့ ဗီဒီယိုလေး မှာတော့ မေပန်းချီက “အပြိုကွီးပါ😝 မောင်လေးတွေ ကို မကြိုက်ဘူး.. အပျိုကြီးမို့လို့ […]